အဲဒီတော. မေတ္တာဆိုတဲ. သဘောတရားကို ဘာနဲ.လေ.ကျင်.ရမလဲ၊ အာရုံနဲ.ပဲ လေ.ကျင်.ရမယ်။ စိတ်တစ်ခုကို ထက်မြက်လာအောင် လေ.ကျင်.ချင်ရင် အာရုံနဲ.လေ.ကျင်.ရမယ်။ ဓားထက်အောင် ဘာနဲ.လုပ်ရမလဲ၊ ကျောက်နဲ.သွေးရတယ်၊ ကျောက်ပေါ်တင်ပြီးသွေးမှ ဓားထက်တယ်။ ထို.အတူပဲ ဒီ မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးဟာ ခိုင်မာကြီးထွားလာအေ
ာင် ဘာနဲ.လုပ်ရမလဲ၊ အာရုံပေါ်တင်ပြီးတော. လေ.ကျင်.ရမယ်။
မေတ္တာကို လေ.ကျင်.ခန်းလုပ်တဲ. နည်းတစ်ခု။ သာမာန်ကုသိုလ်ရရုံပို.တဲ.မေတ္တာမ
ျိုး မဟုတ်ဘူး၊ သာမာန်ကုသိုလ်ရရုံ ပို.တဲ.မေတ္တာကတော. “သဗ္ဗေ သတ္တာ အဝေရာ ဟောန္တု” ဆိုတာပေါ.။ ဘုရားရှိခိုးရင်လည်း မေတ္တာပို.တာပဲလေ၊ သတ္တ၀ါတွေချမ်းသာကြပါစေ၊ အဲဒီဟာမျိုးကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
ဆိုပါစို.- မေတ္တာပို.တဲ.အခါမှာ “ချမ်းသာပါစေ” လို. ပြောချင်တာလား သို.မဟုတ် "ကျန်းမာပါစေ"လို. ပြောချင်တာလား သို.မဟုတ် "အဆင်ပြေပါစေ" လို. ပြောချင်တာလား၊ တစ်ခုခုကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ.ဟာနဲ. ပြောလို.ရတယ်။ "ကျန်းမာပါစေ"လို. ပြောပြော၊ "ချမ်းသာပါစေ"လို.ပြောပြော၊ "အရာခပ်သိမ်း ဆင်ပြေပါစေ"လို. ပြောပြော၊" အောင်မြင်ကြီးပွားပါစေ"လို. ပြောပြော ဘာပဲပြောပြောပေါ.၊ အဲဒီအတွေးလေးကို ထိုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာ ပျိုးရမယ်တဲ.။
ဆိုပါစို.- ယောကျာ်းဆိုရင် ယောကျာ်းကလေး သူငယ်ချင်း၊ မိန်းကလေးဆိုရင် မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းပေါ.။ ရွေးပြီးတဲ.အခါ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနေတဲ. အချိန်လေးမှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ.မျက်နှာ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာအောင် ပုံဖော်လိုက်၊ ပုံဖော်လို.မရဘူးဆိုလို.ရှိရင် ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခု ကိုယ်.ရှေ.မှာထားပြီးတော. ပုံဖော်၊ စိတ်ထဲမှာ ပုံဖော်လို.ရရင် စိတ်ထဲမှာ ပုံဖော်လိုက်၊ သူ.ရဲ.ပြုံးရွှင်နေတဲမျက်နှာ၊ ကြည်နူးနေတဲ.မျက်နှာလေးကို ကြည်.ပြီးတော. အစဉ်ထာဝရ ပြုံးနိုင်ပါစေ၊ ကျန်းမာပါစေ၊ ရွှင်လန်းပါစေ ဆိုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ.စကားလုံးလေးတစ်ခုနဲ. အသုံးချပြီးတော. အဲဒီစိတ်ကလေး ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်နေအောင် repeatation လုပ်နေတာလို.ခေါ်တယ်။ ထပ်ထပ် ထပ်ထပ်ပြီးတော. ဖြစ်နေတာ၊ တစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူး။
ဘယ်နှစ်ပြန်ထပ်ကျော.ရမတုန်းဆိုရ င် တစ်နာရီလုပ်ရင် တစ်နာရီလုံး ထပ်ကျော.နေရမယ်။ အဲဒီလို ဓားများသွေးတဲ.အခါမှာ ကျောက်နဲ. ပွတ်နေသလိုပဲ၊ ဒီချမ်းသာပါစေဆိုတဲ. စိတ်ကလေးနဲ. ခုနက ပိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ. ပွတ်ပေးနေရမယ်၊ အဲဒါ လေ.ကျင်.နေတာခေါ်တယ်။
အဲဒါကို ဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတယ်၊ ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ၄ ယောက်ကို - ဆိုပါစို.- ရှေးတုန်းက လူကိုသတ်ပြီးတော. ယဇ်ပူဇော်တဲ. အလေ.အထရှိတယ်၊ တောထဲမှာနေတဲ.ရဟန်းတွေ ဒီလိုပဲ ယဇ်ပူဇော်တာခံလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ အဲဒီမှာ လာပြီးတော. တောင်းမယ်၊ ယဇ်ပူဇော်ဖို.အတွက် တစ်ယောက်လိုက်ခဲ.ပါပေါ.၊ တစ်ယောက်လိုက်ခဲ.ပါဆိုလို.ရှိရင် အတူနေတာက မိမိကိုယ်တိုင်ရယ်၊ ကိုယ်.မိတ်ဆွေရယ်၊ သာမန် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရယ်၊ ကိုယ်.ရဲ.ရန်သူရယ်လေးယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီ ၄ ယောက်ထဲက ဘယ်သူ.ပေးမလဲ၊ ဘုန်းကြီးတို. စဉ်းစားကြည်.ကြ၊ တစ်ယောက်ယောက်တော.လိုက်ရမယ်၊ ကိုယ်စိတ်ထဲက ဘယ်သူ.ပေးမလဲ၊ သြော် သူတို. ၃ ယောက်တော. နေရစ်ပါစေ၊ ငါပဲ အနစ်နာခံလိုက်ပါ.မယ်ဆိုရင် ကိုယ်.ကိုယ်.ကိုအပေါ်မှာ မေတ္တာပျက်ရာရောက်တယ်၊ သူ.မေတ္တာက မဟုတ်သေးဘူး၊ မမျှတဘူးလို. ပြောရမယ်။
မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကို ရှုတာဟာ နာမ်တရားကို ရှုတာ၊ ထိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ရဲ. တည်ရာမှီရာ နှလုံးသားရုပ်တရားကို ရှုတာဟာ ရုပ်ကိုရှုတာ၊ ဒီလို ရုပ်နဲ.နာမ်နဲ.ကွဲသွားပြီးဆိုလို.ရှိရင် နာမရူပပရိစ္ဆေဒဥာဏ်။
အဲဒီရုပ်နာမ်နှစ်ခု ခွဲခြားသိပြီးတဲ.အခါမှာ ဒီရုပ်ဒီနာမ်တွေဟာ ဘာကြောင်.ဖြစ်တာတုန်းလို. အကြောင်းတရားကို လေ.လာသုံးသပ်နိုင်တဲ. အသိဥာဏ်တစ်မျိုးထပ်ဆင်.ရလာပြီဆိုလို.ရှိရင် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဥာဏ်။
ဒါကြောင်.မို. မြတ်စွာဘုရားက ဟောတယ်။ “ယဒိဒံ မေတ္တာ စေတောဝိမုတ္တိ - စိတ်ရဲ. လွတ်မြောက်မှုလို.ဆိုတဲ. ဒီမေတ္တာတရားဟာ ၊ ဗျာပါဒ ဆိုတဲ. စိတ်ထဲမှာ အလိုမကျနေတဲ. ဒေါသရဲ. ထွက်ပေါက်ပါပဲ တဲ.။ ဒီနည်းနဲ.သာလျှင် စစ်မှန်တဲ. ထွက်ပေါက်ကို ရနိုင်တယ်။
Eingestellt von Dhammaduta Myanmar Buddhist Center Germany um 02:06